विशेष स्थानमा भेटियो ७ इन्च लामो बोतल, एक्सरे रिर्पोटपछि चिकित्सक चकित - Nepali in Australia
February 21, 2021 February 24, 2021 EditorLeaveaComment on विशेष स्थानमा भेटियो ७ इन्च लामो बोतल, एक्सरे रिर्पोटपछि चिकित्सक चकित
एजेन्सी । हिँड्न समस्या भएर अस्पताल पुगेका एक महिलाको एक्सरे रिर्पोट देखेर चिकित्सक चकित बनेका छन्। यो घटना चीनको हो। चीनमा ति महिला हिँड्न समस्या भएपछि अस्पताल पुगेकी थिइन् । अस्पताल पुगेकी उनलाई चिकित्सकले एक्सरे गर्न सुझाव दिए। एक्सरे रिर्पोट आएपछि चिकित्सक समेत चकित बने। एक्सरे रिर्पोटमा ती महिलाको गु’प्ताङ्ग’मा ७ इन्च लामो बोतल देखियो।
चिकित्सकले ६० वर्षीय ती महिलाको शल्यक्रिया मार्फत बोतल निकालेका छन्। शल्यक्रिया पछि ती महिलाको अवस्था सामान्य रहेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। एक दिन कम्मरको तल्लो भागमा चिलाउने समस्या देखियो। जसलाई बोतलको सहयोगमा मे’टाउने प्रयास गर्दा बोतल अ’ड्कि’एको पीडित महिलाले बताएकी छन् ।
यो पनि : यी विशेष स्थानमा साबुन प्रयोग गर्नाले उत्पन्न हुन्छन् समस्या
नुहाउँदा मानिसहरु गलत ठाउँमा साबुन लगाउने गल्ति गर्छन् । नुहाउँदा यदि तपाईले आफ्नो विशेष अंगहरुलाई सफा गर्न साबुन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान रहनुहोस् । यस्तो बानीले तपाईलाई समस्यामा पार्नसक्छ ।
चिकित्सकका अनुसार श’रीरको गु’प्ताङ्ग’मा साबुन लगाउनाले छाला नरम हुन्छ । यसकारण मानिसलाई चिलाउने समस्या उब्जिन्छ । चिकित्सकहरु अधिकांश मानिसहरुले आफ्नो गु’प्ता’ङ्ग’मा धेरै साबुन लगाउने बताउँछन् । यस्तो बानीले समस्या निम्त्याउँछ ।
शरीरमा एकपटक भन्दा धेरै साबुन लगाउनले त्यस स्थानमा अधिक पसिना आउँछ । जसले गर्दा श’रीर’को त्यस भाग सुख्खा हुन्छ र छाला एकदमै कडा बन्छ ।
यदि त्यस्तो स्थान चिलाउने समस्या आउँछ भने चिकित्सकलाई देखाउनुपर्छ अन्यथा त्यसले गम्भिर बिमारी पार्नसक्छ ।कतिपाय मानिसहरु नुहाइसकेपछि श’रीर’लाई कपडाले रगेटेर पुच्छन् । यसो गर्नाले छाला सुख्खा हुन्छ । साथै यसले शरीरका रौंहरु झर्ने खतरा पनि बढ्छ ।
Sign up. vgrmalaysia Password recovery.
राजाको टाउको भएको नोटको मूल्य किन बढ्यो? लाखौंमा बिक्री हुँदै यसरि